PSJTV | मोदीको नेपाल भ्रमण आजदेखि
राजनीतिक र धार्मिक भ्रमणका सिलसिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रोपटक आज शुक्रवार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। जानकी मन्दिरमा हुने विशेष पूजा–आजा, नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै उहाँले रामायण सर्किटको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। भारतका करिब एक दर्जन धार्मिकस्थलसहित, श्रीलंकाका धार्मिकस्थल, नेपालको जनकपुर र जानकी मन्दिर यो सर्किटमा समेटिएका छन्। मोदी आफैले विगतमा चर्चा गर्नुभएको ‘बुद्धिस्ट सांस्कृतिक सर्किट’ भने ओझेलमा परेको छ। यसपटक यो विषयको चर्चा दोहोरिन्छ÷दोहोरिँदैन भन्नेबारेमा कौतुहलताको विषय बनेको छ।
चार वर्षअघि काठमाडौंमा भएको १८औं सार्क सम्मेलनका क्रममा पनि ‘बुद्धिस्ट सांस्कृतिक सर्किट’ चर्चाका रूपमा दोहोरिएको थियो। सन् २०१४को मार्चमा म्यानमारमा भएको तेस्रंो विमस्टेक शिखर सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लुम्बिनी, बोधिगया, कुशिनगर र चीनका समेत केही तीर्थस्थललाई समेटेर बुद्धिस्ट सरकिट बनाउने चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दु बनाउँदै चीन र भारतका तीर्थस्थल समेटिने बुद्धिस्ट सर्किटले धार्मिक पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने चर्चा गर्नुभएको थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को अध्यक्षतामा ‘गे्रटर लुम्बिनी कमिटी’ गठन भए पनि त्यसले परिणाम देखाउन सकेको छैन। यसपटक मोदी भ्रमण तालिका र गतव्यमा लुम्बिनी पर्न नसेकेकाले स्वभाविक रूपमा बुद्धिस्ट सर्किट ओझल परेको अनुभूति गर्न सकिने परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठको बुझाइ छ। तर रामायण सर्किट उद्घाटनका बेला यो प्रसङ दोहोरिन सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हिन्दुत्वको नारालाई जोड दिने मोदीले जनकपुरलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वभाविक हो, लुम्बिनी उनको भ्रमण सूचीमा भएको भए पक्कै पनि यो विषयले ठूलै चर्चा बटुल्थ्यो।’
नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका कारण यसपटक मोदीको लुम्बिनी यात्रा हुन नसकेको श्रेष्ठको ठहर छ। दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास, पर्यटन उद्योगको प्रर्वद्धन, रोजगारको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर यो सर्किट चर्चा हुने गर्छ। यस धार्मिक मार्गबाट नेपाल र नेपालीले लाभ लिन सक्ने प्रशस्तै रहेको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. नरेशमान वज्राचार्यको बुझाइ रहेको समाचारपत्रमा खबर छ ।
‘यो सकारात्मक कुरा हो, यस्तै किसिमले समग्र दक्षिण एसिया समिटने गरी बुद्धिस्ट सर्किट बनाउन सकिन्छ। तर यसबारे एक अर्को मुलुक वीच समन्वय र विस्तृत छलफलको आवश्यक रहन्छ’ –उहाँले भन्नुभयो। प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गठित बृहत्तर लुम्बिनी विकास समितिका कार्यकारी समेत रहनुभएका भिक्षु कौण्डन्यको अनुभवमा नेपालले ठोस पहल अघि बढाउन सकेको छैन। बुद्धिस्ट सर्किटमा लुम्बिनीलाई मात्र नभई कपिलवस्तु, देवदेह, रामग्राम लगायतका गन्तव्यलाई पनि समेटिनुपर्ने आवाज विगतदेखिकै भएको उहाँले बताउनुभयो।